Ahmad Alshugairi; Nin Ummad u dhigma | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 10, 2015	0 445 Views
Jeddah, Saudi Arabia (Himilonews) – Ahmad Mazin Alshugairi wuxuu 19-kii June 1973-dii ku dhashay magaalada Jeddah ee dalka Sucuudiga. Waa geyfane Sucuudi ah iyo hal-tebiye saxaafadeed. Wuxuu kusoo caan baxay barnaamijka Khawatir ee socday 2005-2015 kaas oo guulo kala duwan kasoo hooyay isla Sucuudiga.
Alshugairi wuxuu ku dhashay caruusadda badda Cas ee Jeddah. Kadib ka qalin-jabintiisa dugsiga sare ee Manarat ee Jeddah, wuxuu u kacay dalka Maraykanka halkaas oo uu kasoo qaatay marqaatiga B.A. ee habka maareynta iyo marqaatiga MBA oo uu ka qaatay jaamacadda California, Berkeley.
Sanadkii 1996 ayuu Alshugairi kusoo laabtay Sucuudiga isaga oo bilaabay inuu ka shaqeeyo ganacsiga aabihiis.
Aabihiis waxaa la yiraahdaa Mazen Alshugairi iyo hooyadiis Affaf Ali. Alshugairi wuxuu guursaday laba jeer. Kadib furista xaaskiisa koobaad Yasmina, Alshugairi wuxuu guursaday Rola Dashisha, taas oo sidoo kale ah qaabeeyaha barnaamijka Khawadirka. Waxayna isku dhaleen laba wiil; Yousuf iyo Ibrahim.
Ka bilaabista xirfadiisa sanadkii 2002-da ee barnaamijka Yalla Shabaab ee fogaan aragga, waxaa usii dheer barnaamij kale oo lagu magaabo La socdaal Shiikha Hamza Yusuf ee MBC-ga. Waa sooraha barnaamijka Khawatir kaas oo ahaa mid–intii u dhaxeysay 2005-2015–lasii daayo Ramadaan kasta.
Muddaalaha The 20 Youth Magazine ee kasoo baxda dalka Imaaraatka ayaa Alshugairi ka dhigtay qofka koobaad ee ugu saameynta badan dunida Carabta. Waxaa kale oo uu ku guuleystay shaqsiga da’yarta warfidiyeenka ee facaadka saddexaad ee ugu saameyn badan. Wuxuuna booska 143 ka galay 500 qof ee ugu saameynta badan dunida Carabta marka loo eego sahan ay ban-dhigtay Arabian Business Magazine.
Next: OIC oo TV Islaami ah howl-galinaysa